आजै राजीनामा दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडा, अबको भूमिका के ? - Everest Dainik - News from Nepal
आजै राजीनामा दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडा, अबको भूमिका के ?
काठमाडौंः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिने घोषषा गरेका छन् । सञ्चारमन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता समेत रहेको खतिवडाले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शुक्रबार साँझ राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् ।
संविधानअनुसार संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नमिल्ने व्यवस्थाअनुसार खतिवडाको ६ महिने कार्यकाल शनिबार राति १२ बजे सकिँदैछ । तर, भोलि शनिबार परेकोले उनले आजै साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै खतिवडाको पद धरापमा परेको थियो ।
खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका पात्र हुन् । ओली वामदेवलाई प्रतिनिधि सभाकै कुनै पद रिक्त गराएर निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि सभामा लैजान र खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेर अर्थमन्त्री बनाउन चाहन्थे । तर, उनको त्यो सपना पूरा नभएपछि खतिवडाले राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेटः अर्थमन्त्री खतिवडा
खतिवडाले राजीनामा दिएसँगै उनको नेकपाभित्र के भूमिका रहन्छ भन्ने पनि बहस शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई आफ्नो प्रमुख सल्लाहकार बनाएर सबै मन्त्रालयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिन लागेको कुरा चर्चामा छ ।
ट्याग्स: डा. युवराज खतिवडा, नेकपा, मन्त्रिपरिषद् बैठक